Inona ny efitrano fahatsiarovana an'i Sanno Sodo? | Efitra fahatsiarovana an'i Sanno Sodo
Tsindrio eto raha mila fampahalalana momba ny fampirantiana
Tokutomi Soho sy Catalpa
Ny anarana japoney an'ny hazo catalpa ao amin'ny valan-javaboary dia American Catalpa ovata.Hazo mifandraika amin'i Joseph Hardy Neesima, mpampianatra mandritra ny androm-piainan'i Soho ary mpanorina ny Doshisha University.Mbola voatahiry tsara izy io ho toy ny hazo hajaina izay maneho ny fitiavan'ireo tompo sy mpianatra roa, ary isaky ny Mey sy Jona dia mitondra voninkazo fotsy mamy mamelana izy.
Diary fanafohezana Tokutomi Soho
Teraka tamin'ny 1 Janoary (25 martsa tamin'ny kalandrie vaovao) tao amin'ny Village Sugido, Distrikan'i Kamimashiki, Prefektioran'i Kumamoto, ao amin'ny tanànan'i Mother Hisako.
Nifindra tany Tokyo aho tamin'ny tanjona ho lasa mpanao gazety.Niditra tao amin'ny Tokyo English School (sekoly ambaratonga voalohany voalohany) ary avy eo nifindra tany amin'ny Doshisha English School.
3 martsa Oe Gijuku hisokatra.
Tongasoa an'i Ramatoa Shizuko.
Navoaka "Future Japan".Nikatona i Oe Gijuku ary nifindra tany Tokyo ny fianakaviana manontolo.
Nanangana an'i Minyusha ary namoaka "Naman'ny Firenena".Soho no iantsoana azy.
Famoahana voalohany ny "Kokumin Shinbun", filoha sady lohandohan'ny mpanoratra.
Nitsidika an'i Tolstoy, nitety an'i Eoropa niaraka tamin'i Eigo Fukai.
Voafidy ho mpikambana ao amin'ny House of Lords.
Nandray anjara tamin'ny volan'ny tantara nasionaly japoney voalohany tamin'ny vanim-potoana maoderina.
Sanno Kusado dia vita.Mifindra eto ny fianakaviana.
Mpikambana ao amin'ny Imperial Academy.
Avelao ny orinasa Kokumin Shinbun.Tonga vahinin'ny voninahitra Daigo Tohnichi (Mainichi Shimbun).
Tonga mpikambana ao amin'ny Imperial Academy of Arts.
Nahazo ny filaharan'ny kolontsaina ary nifindra tany Atami Izusan Yoseidou.
Tamin'ny fiafaran'ny ady dia nolaviny ny biraom-panjakana sy ny voninahitra rehetra.
Namita ny volavolan-kevitry ny boky faha-100 an'ny Tantara Nasionaly.
Tonga olom-pirenena manan-kaja tao amin'ny tanànan'i Minamata ary olom-boninahitra tao amin'ny tanànan'i Kumamoto.
Nodimandry ny faha-11 novambra lasa teo tao Atami Izusan Yoseidou.